Ishaywe ngesithende iBig Nuz | isiZulu
Ishaywe ngesithende iBig Nuz
I-BIG NUZ ibungaze olukaBabes Wodumo
Kuthiwa akagxile emaphilisini oweBig Nuz ongaphilile
Durban - Isikhuni sibuye nomkhwezeli eqenjini lomculo wekwaito laseThekwini, iBig NUZ, eke yaba yintandokazi kwabaningi ngesikhathi isashisa izikhotha.
ILANGA LangeSonto lithole ukuthi leli qembu ngeke lisanandisa emcimbini obekulindeleke ukuba linandise kuwona, iGumba Fest Olundi ngempelasonto yokuphela kwale nyanga. IGumba Fest ihlelwa yi-Afrotainment, kanti ixhaswe wuMasipala wesiFunda iZululand.
UDJ Tira nguyena futhi ongu-mphathi weBig NUZ. Abaziqekethayo bathi kuphume umyalelo wokuba iBig NUZ ingalokothi nje ibeke umcondo wayo emcimbini. Njengoba kuqashwe noBabes Wodumo, imithombo ithi kuthiwa angalokothi afike noMampintsha oyilunga leBig NUZ, futhi osebenzisana naye uBabes.
Kusolwa ukuthi lokhu kungenxa yokuthi iBig NUZ yashaya ngesithende umcimbi weNkatha Freedom Party (IFP), iSiyanqoba Rally, ngonyaka odlule obuhambisana nemikhankaso yokhetho lohulumeni basekhaya.
Kuzokhumbuleka ukuthi iBig NUZ yahoxa ukuyonandisa kwiSiyanqoba Rally sekuphume nesikhangiso ebesinesithombe sabaculi ebekukhona kubona nayo iBig NUZ. Leli qembu elihlanganiswe nguMampintsha noDanger, lasichitha lesi sikhangiso lathi singamampunge, lona kalisiyona ingxenye yawo.
Imibiko eyagcina isabalele ngeyokuthi leli qembu lishaye ngesithende lo mcimbi ngoba kungowe-IFP, lingafuni ukuzimatanisa nayo. Ngemuva kokuba iBig NUZ ishaye lowo ngqimphothwe nyakenye, i-IFP ikhiphe isitatimende sabezindaba iqinisekisa ukuthi ibiqashiwe iBig NUZ, yaze yakhokhelwa futhi ibiyazi ukuthi iqashwe emcimbini we-IFP.
Kuleso sitatimende i-IFP ithe isola ukuthi iBig Nuz ifakwe ingcindezi yepolitiki ukuba iwushaye ngesithende umcimbi wayo ngemuva kokushicilelwa kwesikhangiso. Yabe isixwayisa ngokuba abaculi abaziyamanisa namaqembu athile epolitiki bazodicilela phansi umsebenzi wabo.
UMnu Blessed Gwala onguSihlalo kazwelonke we-IFP wathi kufanele yazi iBig NUZ ukuthi kunenqwaba yamalunga e-IFP ayesekayo (iBig NUZ), wathi uma iqhubeka iziphatha kanje bayobheka indaba yokuba banxenxe amalunga e-IFP ukuba ayeke ukuyeseka esikhathini esizayo.
UDJ Tira ongumphathi waleli qembu futhi ohlela iGumba Fest, exhaswe wumasipala wesifunda iZululand, ukuqinisekisile kwiLANGA LangeSonto ukuthi iBig NUZ ngeke ibe yingxenye yomcimbi. Uthi lokhu kungenxa yokuthi kwaba khona ukungezwani endleleni yokuxhumana phakathi kwayo (iBig NUZ) nabe-IFP.
Uthi into edale ukuba iBig NUZ ingabe isaya emcimbini wangonyaka odlule yingoba yayiqashwe kwenye indawo kwaba khona ukushayisana kwemicimbi. “Kwagcina sekuba sengathi kayizange iye emcimbini ngoba uhlelwe yi-IFP okuyinto engelona iqiniso,” kusho yena. Uthi bayafisa ukuba bathole ithuba lokuba kuhlalwe phansi kuxoxwe ngalolu daba.
“Sifisa le nto kwedlulwe kuyona. Asifisi kufike isikhathi lapho ithatheka khona ngesinxele,” kusho uDJ Tira. Ebuzwa ukuthi kungani pho leli qembu labhala ukuthi isikhangiso singamampunge esikhundleni sokuba lisho ukuthi libhukhwe komunye umcimbi uthe: “Kahle-hle sisi kumele izikhulumele yona iBig NUZ, ichaze ukuthi kwenzekani,” kuphetha uTira ngamafuphi.
UDanger ebuzwa ngokushaywa kwabo ngesithende kwiGumba Fest utshele leli phephandaba ukuthi basematasa ngezingxoxo nabe-IFP, kabakafuni ukuba lolu daba luphumele emaphepheni okwamanje. “Sizonitshela uma sesiziphothulile izingxoxo zethu nabo. Okwamanje siseGoli siyoze sibuye mhla zingama-31 kuNtulikazi, ngeke ngikwazi ukusho ukuthi sizoba yingxenye yeGumba Fest noma cha,” kuphetha uDanger.
Okhulumela umasipala waseZululand, uMnu Thokozani Nyandeni, uthe ngeke bakwazi ukuphendula kulolu daba ngoba bona baxhase iLegacy Cup okuzo-be kuqhudelana khona amaqembu ebhola. “Thina njengomasipala kasikwazi ukuba sisho ukuthi ngobani abangeza noma bangezi,” kusho uMnu Nyandeni.
UMnu Joshua Gumede okhulumela i-IFP ucele ukuba kuxhunywane nomasipala ngalolu daba.
“Ngicabanga ukuthi abantu abazokunika into eqondile ngabakwamasipala ngoba yibona abahlele umcimbi,” kusho yena.